Fampidinana: 7,072 alaina 966,971 fotoana.
Miorina amin'ny fanehoan-kevitra vao haingana avy amin'ny fiarahamonina momba ny olana momba ny flaps izay naseho tao amin'ny World Update III, dia nanapa-kevitra izahay fa hamaha ny olana haingana araka izay azonay atao ary hamoaka fanamboarana farany amin'ny herinandro ambony. Satria mila fitiliana tanteraka izany dia hanosika ny Sim Update III sy ny World Update IV isika mandritra ny herinandro. Sim Update III dia mikendry ny voalohan'ny volana martsa ary ny World Update IV dia mikendry ny volana aprily. Ankasitrahanay ny valin-teninao mitohy momba ny olana toa an'io rehefa miezaka ny manao izay mahitsy amin'ny fiarahamoninay izahay.
Ny Q&A mpamorona mivantana manaraka antsika amin'ny Twitch dia ny 10 martsa amin'ny 10:30 maraina PST (1830Z). Ny antsipiriany bebe kokoa dia homena ato ho ato amin'ny forum.
Herinandro mahafinaritra ho an'ny fampandrosoana ny fiaramanidina. Sim Skunk Works dia nanambara ny TF104G Starfighter, DC Designs mampiseho ny sary voalohany an'ny F-14 Tomcat, Just Flight nanambara ny Hawk T1, Whiskey Jet Simulation dia nampiseho bebe kokoa ny Airbus A220, iniBuilds nizara fandrosoana tamin'ny Airbus A300 Beluga sy A310-300 ary ny CRJ an'i Aerosoft dia manakaiky ny famotsorana. Faly be ny ekipanay mahita ireto fiaramanidina mahatalanjona ireto mandroso haingana dia haingana ary porofo lehibe fa mihamitombo sy mihatsara ny SDK.